Silence S03 – 🛵 လျှပ်စစ် Scooter 2020
တိတ်ဆိတ်မှုကို S03 တစ်ခုထိရောက်နှင့်နည်းပညာအရည်အသွေးမြင့် 3-ဘီးလျှပ်စစ် Scooter ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter ဂေဟစနစ် mobility ထံအပ်နှံသောစပိန်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိပြီးအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ S03 လျော့နည်းအတွေ့အကြုံရှိမော်တော်ဆိုင်ကယ်ယာဉ်မောင်းများအတွက် သာ. ကြီးမြတ်တည်ငြိမ်မှုနှင့်တိုးတက်လာသောလုံခြုံရေးအတွက်သုံးဘီးနှင့်အတူပေါ်ပြူလာ S02 Scooter ၏အထူးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနောက်ဘက်ရပ်ဆိုင်းမှုမမှန်အနေအထားများပေါ်တွင်မောင်းနှင်အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ Scooter အကောင်းဆုံးတည်ငြိမ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးနှင့် Two-ဘီးတပ်ယာဉ် S02 မော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောကုန်းတက်တောင်တက်စွမ်းရည်ပေးပါသည်။
အဆိုပါ Scooter 4.5 စက္ကန့်အတွင်း0င်ကနေ 50 km / h မှ accelerates ။ အဆိုပါ Scooter 90 km / h ၏ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းနှင့်အတူမော်တာ Scooter မူကွဲအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။